Nisy fotoana lany tany Apple ve tsara kokoa? | Vaovao IPhone
Izay na oviana na oviana tsara kokoa dia zavatra efa nahazatra anay nilaza tamin'ny ray aman-drenintsika sy ny raibe sy renibenay. Talohan'ny zava-dratsy rehetra dia mora ny mampiasa an'io fitenenana io, ary tato ho ato miaraka amin'i Apple dia mitranga indray izany. Ny tsy fahombiazana niseho tao amin'ny iOS sy OS X, ary koa ny "tsy fisian'ny fanavaozana" amin'ny resaka fikirakirana finday dia miteraka tondra-dresaka ratsy momba ilay orinasa sy ny firosoany mankany amin'ny ho avy tsy azo antoka raha ny filazan'ny zavatra mampidi-doza indrindra. Ny tampon'isa dia tonga tamin'ny andro hafa lahatsoratra avy amin'i Marco Arment ao amin'ny bilaoginy izay niresaka momba ny fihenan'ny kalitaon'ny rindrambaiko Apple tato ho ato.
Tsy zava-baovao akory ny fisehon'ireto lahatsoratra ireto, fa tsy mahazatra an'ny olona avy amin'ny làlan'i Marco, mpamorona ny Instapaper sy Overcast, ny manao izany amin'ny fomba mahery vaika sy manaitra. Raha ny tena izy, Marco Arment mihitsy no nanoratra fotoana fohy taorian'izay manenina ny teniny, raha jerena fa manaitaitra ny lahatsorany, ary manenina noho ny vokatr'izany tamin'ny media hafa. Saingy, misy antony ve izay lazain'i Marco Arment sy izay eritreretin'ireo mpampiasa maro hafa?
Ilay lahatsoratra navoakan'i Antonio Saban, hevitry ny mpampiasa iray izay nampiasa ny vokatra Apple nandritra ny fotoana ilaina mba hahafahana manombana raha tena niharatsy tokoa izany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Raha tsy ampy izany, Daniel Jalkut, mpiasa Apple taloha, dia nandefa valiny tamin'ny lahatsoratr'i Marco Arment izay nambarany mazava fa nanana olana tamin'ny rindrambaiko foana ny orinasa. Samy nanamarika ny zava-misy izy ireo fa amin'ny fotoana maro dia tsy mahatsapa ny mpampiasa Apple: Misy lesoka ny lozisialy Apple, mamita-tena ianao raha tsy izany.
Na dia tsy manana traikefa ampy amin'izany aza aho, satria efa mpampiasa 5 taona teo ho eo raha toa ka tadidiko tsara dia tsy sarotra izany. mitadiava fitarainan'ny mpampiasa amin'ny kinova OS X voalohany. Ny kinova 10.0 (Cheetah) voalohany izay tena Beta an'ny rafitra fiasa Mac izay hitarika ny lalana mandraka ankehitriny, dia tototry ny bibikely ary henjana be ny mpitsikera azy. Ny kinova manaraka (10.1 Puma) tonga enim-bolana taty aoriana dia tsy nanana vintana tsara kokoa, na dia ny 10.2 (Jaguar) izay tonga efa ho herintaona taty aoriana aza dia samy nanana ny heviny ary ny mpitsikera indrindra dia nanohy nanome toky fa voadona bibikely, mamaritra izany toy ny «miadana, tsy matotra ary sarotra ampiasaina. Raha mitsambikina amin'ilay kinova tadiavin'ny mpampiasa maro sy mametraka azy foana ho toy ny loharanom-pahalalana momba ny fitoniana sy ny hafainganam-pandeha isika, OS X 10.6 Snow Leopard, manadino ny tsy fahombiazana lehibe nitranga tamin'ny nanombohany ary mety hahatonga ny mpampiasa hamoy ny angon-drakitra rehetra .
Raha dinihintsika ny valin'ny fikarohana Google momba ny tsy fahombiazan'ny rafitra fiasan'ny Apple dia hitantsika fa tsy nitombo firy izy ireo tamin'ny kinova farany. Ny fikarohana bug amin'ny Yosemite (ny tsimbadika farany an'ny OS X) dia ambany ambany kokoa amin'ny Leopard, eo ambanin'ny Lion sy kely kokoa noho ny an'ny Tigra.
iOS dia rafitra fiasa miaraka amin'ny fitomboan'ny mpampiasa tsy misy fetra noho ny OS X. Lozika ny mieritreritra fa ny fikarohana amin'ny Internet momba ny rafi-piasan'ny finday an'i Apple dia nitombo tsotra satria nitombo koa ny isan'ny mpampiasa sy ny lazany. Ary noho izany dia toa hita taratra amin'ny sary ny fikarohana ao amin'ny Google, nefa na eo aza izany, ary na eo aza ny mety ho eritreretintsika, ny fikarohana fianjerana ao amin'ny iOS 8 dia kely noho ny amin'ny iOS 7.
Mazava fa tsy lavorary ny rindrambaiko Apple, ary tsy mbola nisy toy izany.. Toy ny lafin-javatra hafa amin'ny fiainana, ny olombelona dia manadino ny fotoana mahory taloha mba hijanona amin'ny zavatra mahafinaritra indrindra tadidy ihany, noho izany ilay fomba nanombohana ilay lahatsoratra. Tsy ho sahy manandrana mamantatra ny ho avin'ny orinasa aho, saingy mifototra amin'ny angon-drakitra narosony, ny mazava dia tsy nitovy tamin'ny taloha ny taloha, na tamin'ny andron'i Steve Jobs aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Nisy fotoana nandany tao amin'ny Apple tsara kokoa?
Inona no tsy fitovizan'Andriamanitro, ohatrinona no aloan'ny poma lo anao?
Mitovy aminao ny fifaninanana ... XD
Ny Amazon Cloud Drive Photos dia nohavaozina miaraka amin'ny fitaovana matanjaka